China AI Germ-kuuraya marobhoti AIStrike Kugadzira uye Fekitori | Doneax
Nhare mbozha kupomba ultraviolet sterilizer
(Akangwara pulsed mwenje disinfection robhoti) AIStrike technical parameter
1) Shandisa nzira dzepanyama kuisa utachiona.
2) Pulse xenon mwenje, inopenya arc kureba ≥370 mm, inopenya frequency 2 Hz, iyo system inozviona yega mwenje
Tube hupenyu, shandisa parameter.
3) Huwandu hwekuchaja uye kuburitsa iyo yepamusoro-voltage yekuyerera capacitor ndeye ≥50 mamirioni nguva, uye iyo sisitimu inozvionera yega mamiriro einobuda capacitor uye inoyeuchidza kutsiva iyo yakapera simba capacitor.
4) Kutengesa murwi wekupinza voltage: 220V / 50HZ, kubuda kwemagetsi: 48V15A.
5) Sterilization factor, yakazara-wavelength kupomba kutonhora mwenje 200-1100nm inosanganisira 200nm-315nm
Wave bhendi ultraviolet, pulsed ultraviolet ine wavelength ye250nm-280nm (pa1 mita) simba ≥60000uw / ​​cm2.
6) Iyo yekuuraya mwero weAcetinobacter baumannii AB-CR mushure memaminitsi mashanu eiyo irradiation iri -99.9%,
Mushure memaminitsi mashanu eiyo irradiation, iyo yekuuraya mwero weCandida albicans ndeye -99.9%,
7) Iyo yekuuraya mwero weMRSA -99.9% mushure mekuratidzwa kune imwecheteyo tekinoroji uye yakafanana nhevedzano yezvigadzirwa kwemaminitsi mashanu (3 metres)
Iyo yekuuraya mwero wePseudomonas aeruginosa mushure memaminitsi mashanu eiyo irradiation (pamamita matatu) iri -99.9%.
8) Iyo yekuuraya mwero weKlebsiella pneumoniae ≥99.9% mushure mekuratidzwa kune imwecheteyo tekinoroji uye yakafanana nhevedzano yezvigadzirwa kwemaminitsi mashanu (pamamita matatu),
Kuuraya kweAcetinetobacter baumannii ≥99.9% mushure mekuvhenekerwa kwemaminitsi mashanu (pamamita matatu),
Kuuraya kwehutachiona hwehutachiona mushure memaminitsi mashanu eiyo irradiation (pamamita matatu) iri -99.7%.
9) Iyo disinfection nguva inogona kumisikidzwa kumaminetsi mashanu kusvika gumi, iyo disinfection radius isiri pasi pemamita matatu, uye disinfection countdown basa inogona kumisikidzwa zvinoenderana nehukuru hweiyo disinfection chinhu uye mukamuri; iyo yekuverenga nguva inogona kuiswa uye kuoneka;
10) Iyo iripi chubhu inongoerekana yakwidziridzwa uye kudzikiswa, uye iyo yekusimudza sitiroko haina pasi pe50CM. Iyo yekunze yakakwira-kubvumidza quartz girazi chubhu inoshandiswa kune yakakwira-kubvumidza disinfection uye sterilization. Iyo yepamusoro yakagadzirirwa neozone firita yekuora mambure kuora uye kusefa iyo ozone.
11) Yakatumirwa girazi pamusoro pealuminium inoshandiswa kugadzira yakakombama inoratidzira pamusoro. Iyo reflectivity yegirazi pamusoro pealuminium iri -90%, iyo inowedzera simba rechiedza chakapenyerwa kunze.
12) Iyo system yakagadzirira kushandisa. Mushure mebasa, ozone concentration ndeye -0.1mg / m³ (test test inopihwa), uye hapana kukuvara kwenzvimbo dzakadai semidziyo, mapurasitiki esimbi, mahwindo emadziro, machira, nezvimwe.
13) 7-inch smart capacitive touch screen, iyo software yeiyo yekubata ine mabasa e disinfection yekupedzisa chiyeuchidzo, kusimudza mwenje, kudzikisa mwenje, kutanga kupenya, kumira kupenya, kuisa system, paramende kuisa uye mamwe mabhatani ebasa. Akangwara manejimendi basa, otomatiki kuteedzera kweiyo disinfection maitiro, otomatiki kurekodha akakodzera dhata yeumwe neumwe disinfection, iyo sisitimu inongotora yega data yemumwe module yesystem, uye ine otomatiki alarm basa. Iyo isina waya piritsi iri kure ine mabasa akafanana neiyo huru unit yekubata skrini.
14) Ine mabasa ekuzviongorora otomatiki nekuchengetedza mepu, otomatiki kufamba, otomatiki recharging, otomatiki chipingaidzo kudzivisa, otomatiki alarm uye mamwe mabasa, pasina kupindira kwebhuku, otomatiki disinfection.
15) Uchishandisa laser scanning module, mbiri 3D kamera module uye ultrasonic radar, otomatiki chipingamupinyi kudzivisa uye otomatiki kufamba.
14) Neine hungwaru interface, unogona kuwana nyore kungwara gore manejimendi software kuti uone kutarisisa kwemamashini chinzvimbo, kudhinda data, kubvunza, kutsvaga uye mamwe mabasa.
15) Mugadziri apfuura SIO9001 certification, iyo tekinoroji chigadzirwa chakapfuura CE chitupa, iyo imwechete tekinoroji chigadzirwa ine ruzivo rwekutsvaga mushumo, uye imwecheteyo tekinoroji chigadzirwa chine patent chitupa.
16) Icho chigadzirwa chehunyanzvi chinopa mushandisi runyorwa rwezvipatara gumi zvemumba pamusoro peGrade A.
Type Ultrasonic Sterilization Zvishandiso
Model Nhamba AIStrike
Ruvara Sirivha grey
Nguva yekubvisa hutachiona 5-10Maminitsi
Yakajeka arc kureba 70370mm
Disinfection nharaunda kwete pasi pemamita matatu
Kusimudza kurova kwerambi kwete pasi pe50CM
Ozone concentration mushure mekushanda ≤0.1mg / cubic mita
smart capacitive inobata skrini 7 inch
Lamp hupenyu 4 miriyoni nguva
Net huremu 115kg
1) otomatiki kufamba: Ine yakazara terminal system, mushure mekuisa disinfection nzvimbo, iyo michina inosvika kunzvimbo yekuenda yakazvimiririra;
2) otomatiki chipingamupinyi kunzvenga: Kana uchinge wasangana nechipingamupinyi, chishandiso chinozvidzivirira choga, ronga nzira nyowani, uye usvike kunzvimbo inouraya utachiona;
3) otomatiki kuchaja: Kana bhatiri isina kukwana, chishandiso chinobva chango dzokera kune yakasarudzika murwi murwi wekuchaja;
4) Intelligent disinfection: Pinda muwadi ye disinfection zvinoenderana nenzira yakarongwa, uye vashandi vekurapa havafanirwe kupinda muwadhi zvakananga, vachidzivirira kudzivirira hutachiona.
AI Pulsed Chiedza Germ-kuuraya Robhoti
1) Pfupi disinfection nguva: maminetsi mashanu eiyo disinfection nguva, akawanda mawadhi anogona kutapukirwa nemishonga zuva rega rega;
2) Wide dzakasiyana sterilization: iyo sterilization radius inogona kusvika 3m, iyo inoratidzirwa mwenje uye firita kutarisisa inogona kuvhenekesa yakakwira iyo-frequency frequency nzvimbo yepamusoro, uye nemaoko kuchenesa nzvimbo dzinoregeredzwa zviri nyore, dzinogona kubvisa utachiona zvakanyatsonzwisisika uye zvine mutsindo;
3) Kunyatsovhara mbichana: yakazara-bhendi pulsed ultraviolet (200-315nm) uye yakazara-sipidhi disinfection uye sterilization tekinoroji inogona kuuraya utachiona uye husingagadzikane nemishonga mabhakitiriya;
4) Inoshanda mashandiro: gore-rakavakirwa rakangwara software manejimendi system, yakagadzirira kushandisa;
5) Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kusimba: hapana kukuvara uye disinfection, hapana makemikari masara, hapana zvinokuvadza zvisaririra.
Xenon mwenje 1 chidimbu
Anti-UV magirazi 2 vaviri vaviri
Hwendefa PC 1piece
Robot basic software 1 seti inosanganisirwa muchina wese
Kutengesa murwi 1 seti
Tambo yemagetsi 1piece
Zvadaro: Nhare yeGerm-inouraya Mabhoti PulseIn-D